FBC - Biriiteen taphattoota Waancaa Addunyaa Ruusiyaa irratti bakka ishee bu’an 23 beeksifte
Biriiteen taphattoota Waancaa Addunyaa Ruusiyaa irratti bakka ishee bu’an 23 beeksifte
Finfinnee, Caamsaa 8, 2010 (FBC) Biriiteen Waancaa Addunyaa FIFA 2018 ji’a dhufu Ruusiyaan keessummeessitu irratti taphattoota garee biyyaalessaa ishee bakka bu’anii taphatan 23 beeksifte.
Garicha keessa Wiilsheerii fi karra eegan Joo haart akka hin galle beekkame.
Maqaa taphattoota Leenjisaa Gaareez Saawuthgate filatamanii:
Karra eegdota: Joordan piikfoord (Evaartan irraa) Jaakpuutlaand (Istook Siitii irraa), Niik poopee (Burniley) filatamanii jiru.
Taphattoonni Sarara Ittisaa: Phiil Joons (Maanchistar yuunayited irraa) Joon Stoones(Maanchister Siitii irraa), haarry maaguree (Leestar siitii irraa) Gaarii kaahil (Cheelsii irraa) kayle Waalker (Maanchister Siitii) Kireen Tripeer (Tootinaham irraa) Taarend Aleeksaander Arnoo’id(Liivar Puul irraa) Ashilii Yaang (Maanchister Yuunaayited irraa)akkasumas Daanii Roose (Tootihnam irraa) filatamaniiru.
Taphattoonni Sarara Gidduu: Eerik deer fi Deel Alii (Tootinham irraa), Ruuben Laaftus Cheek (Cheelsii irraa) Haandersan (Livaar Puul irraa) Faabiyan Deef (Maanchister Siitii irraa) Miliyaan fi Liingard (Maanchister Yuunayited irraa), filatamaniiru.
Saraara fuulduraa irraatti ammoo: Raahim istarliing Maanchister Siitii irraa), Herry Keen (Tootinham irraa) Jaamii Veerd (Leestar Siitii irraa) Maarkus Raashfoord (Maanchister Yuunayited irraa) fi Daanii Weelbeek(Arseenal) irraa filatamuu ifoomera.
Toom Hiitiz,Jaamsi Taarkowurki,Liiwiz Kuuk, Jaak Livarmer fi Adam Laalana taphatoota miidhaman bakka bu’uuf warreen filatamaniidha.
Biriteen rammaddii ‘G’ keessatti Beeljiyeem, Paanamaa fi Tuniziyaa waliin ramadamtee jirti.
Oduuwwan Biroo « Peep Gaardiyoolan Leenjisaa cimaa Pirimiyar Liigii Ingiliz ta’anii filataman	Ruusiyaan deeggartoota kubbaa miilaa Ityoophiyaa Viizaa malee waancaa Adunyaa akka daawwatan eeyyamte »